Stresam® (စထရီဆန်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Stresam® (စထရီဆန်)
Stresam (စထရီဆန်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Stresam® (စထရီဆန်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Stresam (စထရီဆန်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Stresam R ကို စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ကြောက်ရွံ့မှု၊ စိတ်တင်းကျပ်မှု၊ စိတ်ကသိကအောင့်ဖြစ်မှု နဲ့စိတ်ကျခြင်း တို့ကိုသက်သာလာစေအောင် အများဆုံးအသုံးပြုပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာ လူနာမှာ ရောဂါအခံရှိမရှိ အထူးသဖြင့် နှလုံးနှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါ တွေကိုလည်း စဉ်းစားရပါတယ်။
Stresam (စထရီဆန်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Stresam R ကို ပါးစပ်ကနေပဲ သောက်သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သောက်သုံးရမဲ့ ဆေးပမာဏနဲ့အချိန် ကတော့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ အတိုင်း သောက်သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးကို မသောက်သုံးခင်မှာ ဆေးညွှန်းနဲ့အမှတ်အသားတံဆိပ်ကို သေချာဖတ်ဖို့လိုပါတယ်။
ဆေးညွှန်းနဲ့အမှတ်အသားတံဆိပ်ပါ အကြောင်းအရာများကိုအသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မိမိဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Stresam (စထရီဆန်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Stresam R ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိုးအောင် နဲ့စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင် သိမ်းဆည်းတဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းမှုတွေ မဖြစ်အောင်လို့ Stresam R ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာ သိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေ မပြုလုပ်ပါနှင့်။ Stresam R ဆေးအမျိုးအစားနဲ့ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှု ပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံ ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေ အကုန်လုံးကို ကလေးတွေ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာ ထားပါ။
Stresam R ကို အိမ်သာထဲပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်ကနေ ဆေးကို ပစ်ချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကို မလိုအပ်တော့တဲ့ အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ ဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ် ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင်ရဲ့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Stresam (စထရီဆန်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Stresam R ကို မသောက်သုံးခင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များရှိရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။
Stresam R သောက်သုံးရင်း ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်ပွားခြင်း
အခြားသောဆေး၊ အစားအစာ၊ ဆိုးဆေး၊ တာရှည်ခံဆေး သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်များ နှင့် ဓါတ်မတည့်မှု ရာဇဝင် ရှိခြင်း
အခြားသောရောဂါများတွင် အသုံးပြုသော ဆေးဝါးများနှင့် Stresam R ကြား ဆေးဝါးဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Stresam (စထရီဆန်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Stresam (စထရီဆန်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အခြားသောဆေးဝါးများလိုပဲ Stresam R ကို သောက်သုံးခြင်းကြောင့် အချို့သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အများစုသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဟာ ဖြစ်ပွားမှု လွန်စွာနည်းပါးပြီး ကုသမှုခံယူရန် မလိုအပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် အကယ်လို့ဆေးသောက်ပြီးချိန် တစ်စုံတစ်ရာ ပြသာနာ ဖြစ်ပွားခဲ့ရင် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့အမြဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အချို့သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုကတော့
အရေပြားပေါ်တွင် အနီကွက်ထွက်ခြင်း (ဖြစ်ခဲပါတယ်)
ဘယ်ဆေးတွေက Stresam (စထရီဆန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Stresam R ဟာ သင်အခု လောလောဆယ်ဆယ် သောက်သုံးနေတဲ့ တခြားသောဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မလိုးလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားပဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင် ပစ္စည်းတွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေ မပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Stresam (စထရီဆန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Stresam R က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင် ဆေးမသောက်မီကတည်းက အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေ ရှိမရှိကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Stresam (စထရီဆန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Stresam R ဟာ သင့်ရဲ့နဂို ကျန်းမာရေး အခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ လတ်တလောဖြစ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
Myasthenia gravis ခေါ် ကြွက်သားအားနည်းရောဂါ
အသည်းကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ခြင်း
ကျောက်ကပ်ကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ခြင်း အစရှိတဲ့ ရောဂါများရှိခဲ့ရင် ကြိုတင်အသိပေးသင့်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Stresam (စထရီဆန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Stresam R ကို သောက်သုံးရမယ့် အချိုးအစားအတွက် သိလိုသော အချက်အလက်များကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ပေးလေ့ပေးထရှိတဲ့ ဆေးအချိုးအစားကတော့ ၅၀ မီလီဂရမ် (ဆေးတောင့် ၁ တောင့်) ကို တစ်နေ့၃ကြိမ် သို့မဟုတ် ၁၀၀ မီလီဂရမ် (ဆေးတောင့် ၂ တောင့်) ကို တစ်နေ့၂ကြိမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကုသချိန်ကတော့ ရက်အနည်းငယ်ကနေ ၃ပတ် သို့မဟုတ် ၄ပတ်ထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Stresam (စထရီဆန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးငယ်များနှင့် အသက် ၁၈ နှစ်အောက် လူငယ်များမှာ ဆေးကိုအသုံးပြုရန် အတည်ပြုထောက်ခံထားခြင်း မရှိပါ။
Stresam (စထရီဆန်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Stresam R ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံ အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးတောင့်ပုံစံ ပြင်းအား ၅၀ မီလီဂရမ် ၊ ၁၀၀ မီလီဂရမ်
Stresam R ကို သောက်သုံးဖို့လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့သွားခဲ့ရင်) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်သုံးရမယ့် အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။
Stresam® (etifoxine). http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/34960- Stresam-indications-posologie- et-effets-secondaires. Accessed October 18, 2016.
ကလေးသူငယ်များ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် အနိုင်ကျင့်တိုက်ခိုက်မှုခံနေရသည်ကို သိနိုင်မည့်လက္ခဏာများ
ဆယ်ကျော်သက်သားသမီးတွေကို စိတ်ဓါတ်မကျအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးကြမလဲ